AMAKHETSHI ASE-VOLCANO - Hale Alala
(202 okushiwo abanye)
I-indlwana ephelele ibungazwe ngu-Eileen
QAPHELA: Ngenxa yemikhawulo ye-Covid-19 e-Hawaii County, ukuqashwa kweholide kungase kungasetshenziselwa izinjongo zokuvalelwa ngaphansi kwanoma yiziphi izimo. Ngaphambi kokufika endlini encane, zonke izihambeli zabantu abadala zizocelwa ukuthi zinikeze isithombe-skrini sohlelo lwazo lokusebenza lwe-Safe Travels ebonisa ukuthi ukuvalelwa akudingekile yisifunda. Izakhamizi zaseHawaii zingasebenzisa ilayisense yamanje yokushayela njengobufakazi bokuhlala.
I-Hale 'Alalā iqanjwe ngegwababa lase-Hawaiian elisengozini enkulu yokushabalala libuyiselwa emahlathini azungeze iVolcano. Awasekho ama-Alala ahlala endle, kodwa ungabona i-Alala ephilayo ePanaewa Zoo eHilo (kungenwa mahhala).
Ikotishi lihlala cishe amakhilomitha angu-3 ukusuka emgodini wentaba-mlilo futhi litholakala ehlathini elinemvula futhi alibonakali nhlobo emgwaqeni, okwenza lokhu kube indawo eyimfihlo ewuhambo oluyimizuzu emi-5 nje (amamayela angu-3.3) ukuya esangweni lokungena le-Hawaii Volcanoes National Park.
Leli kotishi elithokomele linokuthinta okuningi okucatshangelwayo okufana namawashi esipikha se-Bluetooth anezimbobo zokushaja ze-USB zogesi wakho, indawo yomlilo kagesi egunjini lokuhlala negumbi lokulala, kanye nekhishi elinazo zonke izitsha nezinto zikagesi okufanele uzidinge ukuze uthole ukudla okusheshayo.
Igumbi lokulala linombhede olingana nendlovukazi kanti igumbi lokuhlala linombhede kasofa wendlovukazi.
Kukhona nesitebhisi endlini okungenwa kuso ngeladi lamapulangwe. Uma uhamba nengane encane noma izingane, sicela uqiniseke ukuthi uzokwazi ukulawula ukufinyelela esitebhisini nendawo ephezulu ukuze ziphephe.
4.99(202 okushiwo abanye)
4.99 · 202 okushiwo abanye
Bonisa zonke izibuyekezo ezingu-202
Izakhamuzi zentaba-mlilo ziyakwazisa ukuthula nokuthula kwazo, uzozwa izinyoni kuphela ngenkathi ulapha. Sicela uhloniphe omakhelwane ngokugcina umsindo ube mncane ngesikhathi uhlala. Izinsuku zimnandi futhi zipholile ngale ndlela ekhuphuka entabeni futhi ubusuku bungabanda, ngakho-ke letha ibhantshi.
I-Volcano Village ingaphezu komgwaqo onguthelawayeka uma kwenzeka ufuna ukudla ukudla noma ukuthenga okuthile okwenziwe endaweni ukuze kukukhumbuze ngohambo lwakho.
Ukuzingena ngokwakho kuphathwa ngebhokisi lokukhiya. Zivumele ungene futhi uphumule! Sihlala singumbhalo nje noma ucingo uma unemibuzo.
Inombolo yepholisi: STVR-19-366280 NUC-20-1987 GE/TAT-115-174-1952-01